Afhayeen Quraan-jecel,”Xukuumadda Puntland Waa Uga Furfurantahay Shacabka Xukuumadihii Hore”.
Afhayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac (Quraan-jecel), ayaa jawaab kulul ka bixiyey eedayn ay xukuumadda u jeediyeen siyaasiyiin reer Puntland ah.
Quraan-jecel ayaa sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay imbadan ka furfuran tahay xukuumadihii ka horeeyey, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda iyo dhegeysiga aragtida bulshada.
Afhayeenku wuxuu sheegay in xukuumaddu ay imbadan u dhega nugu shahay shacabkeeda, islamarkaana madaxweynaha dalka ugu sareeya uu imbadan shacabka kadhegeystey aragtidooda haddana ay diyaar u tahay dowladdu inay u hogaansanto aragtidooda.
Hadalka afhayeenka ayaa imaanaya xilli dhowaan rag ka soo jeeda deegaamada Puntland ay dhaliileen siyaasadda dowladda, inkastoo shacabka Puntland ay ka marqaanti keceen waxqabadka wanaagsan ee xukuumadda.